बुद्धका दस विपत्ति :: a1nepal.com.np
बुद्धको नाम लिनेबित्तिकै सर्वसाधारणको मनमा शान्ति र सदाचारको सूर्य उदाउँछ । तर, उनी निरपेक्ष शान्तिका पक्षधर थिएनन् । शान्तिको मन्त्र जप्दैमा त्यो त्यसै आउने कुरा होइन । शान्ति ल्याउनु छ भने अन्याय हटाउनुु अनिवार्य छ ।
‘जहाँ अन्याय छ, त्यहाँ छायाले जस्तै अशान्तिले पछ्याउँछ,’ उनी भन्थे, ‘अन्यायमा शान्तिको खोजी त्यतिकै निरर्थक छ जति निरर्थक सिउँडीको बोटमा सुन्तला फल्ने आशा गर्नु हुन्छ ।’ आज अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको तनावले विश्वशान्ति खलबलिने खतरा छ । तर, २५ सय वर्षअघि जन्मेका बुद्धको शान्ति र न्याय चेत यति उँचो थियो जसलाई एक्काइसौँ शताब्दीका ‘शान्तिवादी’ हरूले अझै बुझ्न सकेका छैनन् । भारतीय विद्वान् बीआर अम्बेडकरको किताब ‘बुद्ध एन्ड हिज धम्म’ का अनुसार शाक्य र कोलिय राज्यबीच रोहिणी नदीको पानी प्रयोग गर्नेबारे झगडामा तत्कालीन राजकुमार सिद्धार्थले आफ्नै राज्यका किसानको पनि गल्ती औँल्याएका थिए । आफन्त, पराई वा राष्ट्रवादभन्दा उनका लागि मानवता, न्याय, सत्य र अहिंसा सर्वथा महत्त्वपूर्ण थिए ।
बुद्ध त्यतिखेर ५६ वर्षका थिए जब उनको सामना खतरनाक हत्यारा अंगुलीमालसँग भयो । भियतनामी बौद्ध विद्वान् तिक न्यात हन्हको किताब ‘ओल्ड पथ, ह्वाइट क्लाउड’ का अनुसार जालिनी वनबाट ऊ कोसल राज्यको श्रावस्ती प्रवेश गर्दा पूरै बस्ती मसानसरह सुनसान थियो । मानिसहरू दिउँसै ढोका बन्द गरेर बस्थे । हरेक व्यक्तिको हत्यापछि ऊ त्यसको एउटा औँला मालामा उन्थ्यो । सय जनाको हत्या गरेर तिनका औँलाको माला लाएपछि आफ्नो मायावी शक्ति बढ्ने भ्रम उसलाई थियो । एकपल्ट चालीस जनाले घेरा हाले । अद्भुत युद्धकला जानेको अंगुलीमालले छिनभरमै अधिकांशलाई मारिदियो । बाँकीले भागेर ज्यान बचाए । राजा प्रसेनजितले उसलाई पक्रन सशस्त्र सेना तैनाथ गरेका थिए । तीमध्ये कतिपयलाई उसले मारिसकेको थियो । यो थाहा पाउनासाथ बुद्ध निडर भएर एक्लै श्राबस्तीमा हिँड्न थाले । अंगुलीमाल हकार्दै, खुँडा ताक्दै आइपुग्यो । एउटा रूखअगाडि उभिएर शान्त स्वरमा बुद्धले भने, ‘अंगुलीमाल, म तिम्रो उद्देश्यका लागि मारिन तयार छु । तर, त्यसका लागि तिमीले मलाई यस रूखका चारवटा पात टिपेर ल्याइदिनुपर्छ ।’ पहिलोपल्ट आफूसँग निडर भएर बोल्ने मान्छे भेट्दा अंगुलीमाल हच्कियो र चारवटा पात टिपेर ल्याइदियो । बुद्धले फेरि भने, ‘अब यो पात जस्ताको तस्तै त्यही हाँगामा लगेर जोडिदेऊ ।’
स्वस्थ्य जीवनको सात सूत्र – अत्यन्तै महत्वपुर्ण करेला खाने सहि तरिका, यस्ता छन् ८ फाइदा उच्च रक्तचापले मुटु र आँखामा समस्या पार्छ पेट सफा हुँदैन ? यस्तो छ सजिलो उपचार क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा प्रेम र प्रेम दिवस क्यान्सरको रोकथाम कसरी गर्ने? चुरोटको धूँवाभन्दा अगरबत्तीको धूँवा खतरनाक हरिबंशको रमाइलो मन छुने कुरा… किन हुन्छ डाक्टरमाथि बारम्बार आक्रमण ? (सरला कट्टेलको विशेष रिपोर्ट)
← स्वस्थ्य जीवनको सात सूत्र – अत्यन्तै महत्वपुर्ण	इजरायलमा गुरु माता राधिका दासीजीद्वारा आध्यात्मिक प्रवचन →